Bulọ nyocha na-arụ ọrụ
Alfa ụlọ nyocha Epistane
Gịnị bụ Epistane? Youchọrọ iwere arụmọrụ mgbatị gị na ọkwa ọzọ? Kedu maka ịmeghe anụ ọhịa mgbatị zoro ezo n'ime gị nke na-echere iwepụta A-egwuregwu? Họrọ Epistane nke nwere ikike ịbawanye ụba ọkpụkpụ, ịda ụda akwara, arụmọrụ, na uru ike. A na-enwekwa mmasị na ya na ụwa nke ịkpụ ahụ maka ikike ya iji melite ngwongwo ahụ ma belata abụba dị ka izu 8-12. Abamuru nke Alfa Labs Epistane Akọrọ, uru na-adịghị mma na oke ike mmadụ Nsonaazụ ahụ ike na uru dị ukwuu Ọ dịghị njigide mmiri ma ọ bụ bloating Na-eme ka ahụ ike ...
7 Mmega Mmeghari Ahụ Ikwesịrị izere
Mgbe anyị na-eri ezigbo nri ma na-emega ahụ oge niile, oge ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ịghọta ihe kpatara na anyị anaghị ahụ oganihu. Eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ anyị na-emebi ọganiihu anyị site na ịghara ịgbaso ụfọdụ usoro usoro mmega ahụ. Ihe ị na-eme mgbatị ahụ dị oke mkpa dị ka ịrụ ọrụ n'onwe ya. Eziokwu zuru ụwa ọnụ bụ na anyị niile chọrọ ị nweta ọtụtụ ihe na mgbatị anyị. Ma ebumnuche gị bụ ịhapụ ibu ma ọ bụ nweta ahụ ike, anyị maara na ịchọrọ ịmezu ebumnuche gị ngwa ngwa o kwere mee, yabụ anyị achịkọtara ndepụta nke mmejọ mmega ahụ ị kwesịrị izere. Gịnị mere o ji dị mkpa ...
Nsonaazụ SARM: Kdị Nsonaazụ I Kwesịrị Extụ Anya Ya?
SARM ma ọ bụ Nhọrọ Androgen Receptor Modulators bụ ụdị ọhụụ dị ọhụrụ nke na-ewu ewu n'etiti bodybuilders. Ndị na-eme egwuregwu na-ewere ihe mgbakwunye ndị a iji kwalite arụmọrụ ha. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ha na-arụ ọrụ site na ịtinye aka na etrogen ma ọ bụ ndị na-anabata hormone nwoke gị. Otú ọ dị, ha nwere anabolic, ma ọ bụ ihe na-ewu ahụ ike n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-achịkwa homonụ ma ọ bụ steroid; Nsonaazụ SARM na-enye ohere maka nrụzi akwara ngwa ngwa, na-ekwe ka akwara gị wepụ obere oge iji weghachi. Ọkà mmụta sayensị Prọfesọ James T Dalton bụ onye mbụ gosipụtara SARMS na mmalite 1990s. Dalton gafere SARM andarine ka ọ na-enyocha ọgwụgwọ maka ọrịa cancer prostate. Mgbe Dalton ...
Lablọ nyocha Alfa abanyela - Mmeju, Ndụmọdụ & Ọzọ
Alfa Labs abanyewo na oke ogo dị iche iche nke pro homonụ, mgbakwunye & usoro ọgwụgwọ Post! Ngwaahịa Alpha na-enye uru kachasị mma maka ego ebe ha na-ejigide ngwaahịa kacha mma dị na ahịa. Prohormone Series Alpha Labs Epistane -Powerful Pro-hormone nwere mgbatị na mmetụta chiselled Alpha Labs Trenavar - Otu n'ime Pro-homonụ kachasị ewu ewu na ahịa. Alfa Labs M-Sten - Methylstenbolone nnukwu uru na nha na ike SARM Alfa Labs TLB-150 - A ogologo ester nke na-ewu ewu RAD-150 Mmeju & ​​PCT enyemaka Alfa Labs Armistane - Ihe ngwọta dị mma iji meziwanye etemeete mkpụrụ ọgwụ Alpha Labs Laxogenin ...
adịbeghị anya Articles